जापान मा वार्षिक घटनाहरु! नयाँ वर्ष, हनामी, ओबोन, क्रिसमस र अधिक! - Best of Japan
रंगीन फेन्सी कार्प माछा, कोइ फिश = शटरस्टक
जापानमा अझै धेरै परम्परागत वार्षिक घटनाहरू छन्। धेरै जापानी मानिसहरु आफ्नो परिवार संग यी वार्षिक घटनाहरु मनाउन छनौट गर्दछन्। हालसालै धेरै विदेशी पर्यटकहरूले त्यस्ता घटनाहरूको आनन्द उठाए। यी मध्ये एक घटना मार्फत तपाईं जापानी संस्कृतिको राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखले यी वार्षिक घटनाहरूको विवरण दिन्छ।
नयाँ वर्ष घटनाहरू
नयाँ वर्षको लागि वार्षिक घटनाहरू जापानमा सबैभन्दा ठूला हुन्। वर्षको अन्त्यबाट निम्न घटनाहरू वार्षिक रूपमा लिन्छन्।
जोया कुनै केन
"जोया नो केन" बौद्ध मन्दिरहरू = शटरस्टकमा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम हो
"जोया नो केन" बौद्ध मन्दिरमा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम हो। डिसेम्बर 31१ मा मध्यरातमा पुजारीहरूले मन्दिरको ठूला घण्टीहरू १०। पटक बजाउँदछन्। मानिसहरु लाई लाग्न सक्छ 108 चिन्ताहरु। घण्टी बजाउने पछाडिको अर्थ ती भावनाहरू लाई हटाउनु हो।
"तोशी-कोशी सोबा" नूडल्स सामान्यतया डिसेम्बर st१ मा खाइन्छन्। जापानीहरूले लामो नूडल्स खाए यस आशामा कि उनीहरू भाग्यशाली जीवन बिताउँछन्।
टोक्यो, जापानको Asakusa मा Hatsumode को भीड। हाट्सुमोडे जापानी नयाँ वर्ष = शटरस्टकको पहिलो शिन्टो मन्दिर वा बौद्ध मन्दिर भ्रमण हो
"हात्सुमोडे" मन्दिरको मन्दिरमा वर्षको पहिलो यात्रा हो। नयाँ वर्षमा, प्रत्येक मन्दिर र मन्दिरमा धेरै मानिसहरूले यो भ्रमण गरिरहेका थिए।
"Setsubun" एक जापानी परम्परागत घटना हो = शटरस्टक
"Setsubun" एक परम्परागत घटना हो दुष्टता हटाउनका लागि। यो फेब्रुअरीको शुरुमा आयोजित हुनेछ। "ओनि-वा-सोटो, फुकु-वा-यूती" भन्दै मानिसहरूले घरमा बीनहरू फ्याँकिदिन्छन्, जसको अर्थ हो "भूतहरूसंग बाहिर! शुभकामनाको साथ!"
"हनामी" चेरी खिलने दृश्य हो, जुन वसन्तमा आयोजित गर्न सकिन्छ जब चेरी फूलहरू खिलिरहेका छन्। हरेक वर्ष, धेरै व्यक्तिहरू चेरी रूखहरू मुनि खाने र पिउने आनन्द गर्छन्।
माउन्ट फुजी र दूधिया तरीका = शटरस्टक
जापानमा बाँस तनाबता चाड = शटरस्टक
"तानाबाटा" चाडपर्व हो जुन जुलाई on, वा केही क्षेत्रमा August अगस्तमा चिनियाँ लोकका अनुसार
वीभर स्टार (भेगा) र Cowherd स्टार (Altair) एक अर्कालाई माया गर्छन्। तर तिनीहरू मिल्की वे द्वारा विभाजित छन्। तिनीहरू यस दिनमा वर्षमा एक पटक मात्र भेट्न सक्दछन्। जापानी मानिसहरु लम्बेदार कागजमा आफ्नो इच्छा लेख्छन्, बाँसको हाँगाहरूमा बाँधेर सजावट गर्छन्।
नदीमा प्रवाह गर्नुहोस् पूर्वजहरूका लागि लालटेन स्मारक सेवा, यो परम्परागत घटना हो = शटरस्टक
Hibiya पार्क, जापान = शटरस्टकमा बोन Odori उत्सवमा नाचिरहेका मानिसहरू
"ओबन", वा बोन फेस्टिवल, जापानी मानिसहरुको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण वार्षिक घटनाहरु मध्ये एक हो। बोन फेस्टिवल मृतकको भावनालाई सान्त्वना दिनको एक घटना हो। सामान्यतया, ओबान अगस्त १ 13 देखि १ 15 सम्ममा आयोजित गरिन्छ। केही क्षेत्रहरूमा यो १ it देखि जुलाई १th सम्म आयोजित गरिएको छ।
यो विश्वास छ कि मृतकको आत्मा बोन फेस्टिवलको बेला उनीहरूको घर फर्कन्छ।
व्यक्तिहरूले मृतकको आत्मालाई अभिवादन गर्न फेरि आगो प्रयोग गर्दछन् र यसलाई फेरि पठाउँछन्। यस अवधिमा, मानिसहरू प्राय: सहरमा जम्मा हुन्छन् र राती नाच्न रमाउँदछन्।
तीन वर्ष उमेरका केटाहरू र केटीहरू, पाँच बर्षे उमेरका केटाहरू, र सात बर्षे केटीहरू योग्य छन्
"शिचिगोसन" बच्चाहरूको कार्यक्रम हो नोभेम्बर १ around को वरिपरि आयोजित। बच्चाहरूलाई मन्दिरमा लैजानुहोस् र बच्चाहरू सुरक्षित रूपमा हुर्कनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तीन वर्ष उमेरका केटाहरू र केटीहरू, पाँच बर्षे उमेरका केटाहरू, र सात बर्षे केटीहरू योग्य छन्। जब घटना समाप्त हुन्छ, अविभावकहरूले मन्दिरमा "Chitose Ame" भनिने लामो स्टिक क्यान्डी किन्छन् र घरमा खानेछन्।
ओसाका, जापानमा क्रिसमस बत्तीहरूको सजावट
प्रत्येक वर्ष नोभेम्बरको अन्तमा, क्रिसमसको रोशनीले जापानी शहरहरू सजाउँदछ। क्रिसमस संगीत पनि शहर वरिपरि मुटु हुन सक्छ। डिसेम्बर २th मा, बच्चाहरू साना क्लाउजले तिनीहरूलाई दिने क्रिष्टमस उपहारहरूको प्रतीक्षा गर्दै निद्रामा पर्ने छन्। जोडीहरूले एक अर्कालाई क्रिसमसको भावनामा उपहार दिन्छन्। अधिकांश जापानी मानिसहरु इसाई होइनन्। यद्यपि जापानी व्यक्तिहरु सबै आफ्नो नयाँ जीवन संस्कृति मा नयाँ सम्मिलित गर्छन्।